China Transparent Round Girazi Threaded Uchi Jar neTin Lid Factory uye Vagadziri | Chuancheng
Nzvimbo yakakodzera yekuchengeta huchi hwepanyama kana sosi mune chaiyo mamiriro. Stylish dhizaini yakanaka yekubika mukicheni yako kana kushumira patafura yako
Flip-yepamusoro screw cap inofanana nemuromo webhodhoro kuti udzivise kuvuza kwemvura. Zvakachengeteka kwazvo kushandisa. Uchi hunonyatso kuoneka muhombodo yakajeka.
Iyi mudziyo yakajeka, ichiita kuti ive yakakodzera kuratidza mudziyo weuchi wako.
Caps dzinogona kuvhurwa uye kuvharwa zvinyoro-nyoro uye nyore.
Yakanakisa Jar Kuchengeta Uye Kudonhedza Uchi: Iyo mudiki mudiki uchi muhari ine lid neti yakajeka yeti kudonhedza uchi, zviri nyore kuwedzera uchi kune zvinwiwa zvinopisa kana chingwa pasina kusvibisa mamwe midziyo uye pasina kugadzira kunonamira.
Huchi Inomira Nyowani uye Nyore Kuti Isvike: Iko kune yekuvhurwa padivi rekubata dipper, uyu muchengeti weuchi haazi mweya.
Huru poto yakagadzirwa neye classy yakakwira borosilrate girazi-isina-kune chepfu, isina kusvibiswa, Hapana kusvibiswa, yakanakira, yakajeka.9 inoratidza kugona kukuru.
Inogadzira chipo chikuru kune varidzi vemba nyowani, vanoda tii, kana chero munhu anofarira kubika. Iyi yekirasi inotaridzika yakajeka girazi yakakura kuwedzera kune chero kicheni uye yakavimbiswa kukwezva kutarisa.
Wedzera nyore uchi uchi kune zvinwiwa zvinopisa kana chingwa pasina kukanganisa mamwe maturusi kana kukonzera kuomerera.
Isiri-isina chepfu, isina kunhuhwirira, isina kusvibiswa, yakanaka uye yakajeka. Hutano hwegirini.
Dhizaini yakajeka inoita kuti zvive nyore kuona izvo zvasara muhari.
Huchi uye fani pot muhari dhizaini kugadzira kwako nyore
Kusvikira chifukidziro chegirazi kunogona kunyatso kudzivirira uchi kuti usapinda muguruva.
Nzvimbo yakakodzera yekuchengeta huchi hwepanyama kana sosi mune chaiyo mamiriro. Stylish dhizaini yakanakira yekubheka mukicheni yako kana kushumira patafura yakoFlip-kumusoro chikwangwani cketi chinoenderana nemuromo webhodhoro kuti udzivirire kukwirira kwemvura. Zvakachengeteka kwazvo kushandisa. Uchi hunonyatso kuoneka mubhodhoro rinoonekera.Chinhu ichi chakajeka, chichiita mudziyo wakanaka wekuonesa uchi hwako.
Caps dzinogona kuvhurwa uye kuvharwa zvinyoro-nyoro uye yea
Yepfuura: Kupisa kutengesa kicheni chirongo kuseta chengetedza chikafu chekuchengetedza mabhodhoro emidziyo neasina lid
Inotevera: Mason Jar Wedding Favours Apothecary Jars Nyuchi dzeRot Pot
Girazi bhodhoro reuchi
Hexagon Uchi Mapani
Nyuchi Yegirazi Yegirazi
Huchi yeGirazi Bhodhoro
Nzungu Majee eGirazi Hexagonal
Tsika Round Chikafu Cheuchi Kuchengeta Wide muromo Glas ...
Kutengesa kupisa kicheni chirongo kuseta chengetedza chikafu chengetedza ...
Mini Girazi Hexagon Jars